LDRS ချစ်သူတွေ အနေဝေးတဲ့ ကာလကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းသင့်သလဲ ? - Achit Zone
HomeLDRSLDRS ချစ်သူတွေ အနေဝေးတဲ့ ကာလကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းသင့်သလဲ ?
April 18, 2020 Cupid LDRS, Lifestyle, Relationship
ချစ်သူနှစ်ဦး အနေဝေးနေပေမဲ့ အချစ်တွေ သွေးအေးမသွားအောင် ဒီအချက်လေးတွေ လိုက်နာသင့်ပါတယ်။
၁။ အချိန်ပြည့် ဆက်သွယ်နေဖို့ မလိုပါဘူး။
စုံတွဲတော်တော်များများကတော့ တစ်နေ့ကို ၁၂ နာရီလောက် ဆက်သွယ်နေရမှ ခိုင်မြဲမယ်လို့ ထင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုလုပ်နေတာက သူတို့ရဲ့ အကွာအဝေးကို နီးစေမယ်လို့ ထင်ကြပါလိမ့်မယ်။ တကယ်ကတော့ အဲ့လိုလုပ်စရာမလိုပါဘူး။ ဒါက ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်ပျက်စေပြီး ပင်ပန်းရပါလိမ့်မယ်။ ဆက်သွယ်ရတဲ့အချိန်လေးတွေမှာ ပျော်စရာလေးတွေဖြစ်အောင်ပဲ လုပ်လိုက်ပါ။ Achitzone.com
၂။ ဝေးနေရတာကို အခွင့်အရေးတစ်ခုအဖြစ်မြင်လိုက်ပါ။
အတူတူနေချင်တယ်ဆိုရင် ခွဲနေရတဲ့ ခံစားချက်ကို အရင် ခံစားလိုက်ပါဆိုတဲ့အတိုင်း ခု ဝေးနေရတာဟာ နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်တွေ ပိုပြီးခိုင်မာစေမယ်လို့ တွေးပါ။ ဝေးနေရတဲ့အချိန်တွေဟာ နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ အချစ်ကို ပိုပြီး ခိုင်မာစေပါတယ်။အနေနီးနေပေမဲ့ ခံစားချက်ချင်း ဝေးနေတာထက်စာရင် အနေဝေးပေမဲ့ ခံစားချက်ချင်း နီးစပ် ရင်ခုန်သံတစ်ထပ်တည်းကျနေတာ ပိုကောင်းတာပေါ့။ Achitzone.com
၃။ နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ ရှင်းလင်းနေပါစေ။
long distance relationship ဖြစ်နေစဉ်အတွင်းမှာ တစ်ယောက်က တစ်ယောက်ကို ဘာတွေ မျှော်လင့်ထားသလဲဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်လုပ်ထားပါ။ အခြေခံစည်းကမ်းလေးတွေ သတ်မှတ်ထားတာ ကောင်းပါတယ်။ Achitzone.com
၄။ အချိန်မှန်မှန် ဆက်သွယ်ပေးပါ။
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် Good Morning နဲ့ Good Night ပြောတာကတော့ အမြဲလုပ်သင့်တဲ့အရာပါ။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဓာတ်ပုံပို့ပေးတာတွေ audio clip တွေ ဗီဒီယိုလေးတွေ ပို့ပေးတာမျိုးလုပ်ပါ။ Achitzone.com
၅။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အထင်လွဲစေမဲ့အရာမျိုးတွေ ရှောင်ပါ။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ night out ထွက်တာမျိုး club သွားတာမျိုးလုပ်တဲ့အခါ ကိုယ့်ချစ်သူကို အသိပေးပြီးမှ သွားတာမျိုးလုပ်ပါ။ မဟုတ်ရင် သူက ကိုယ့်ကို အရမ်းစိတ်ပူနေတာမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သူ့ကို အရေးမပါသလို ဆက်ဆံတယ်လို့ ထင်ပြီး ဝမ်းနည်းပါလိမ့်မယ်။ Achitzone.com
၆။ အားလပ်ချိန်တွေ အတူတူ အချိန်ဖြုန်းပါ။
online game တွေ အတူတူ ကစားတာမျိုး video call ခေါ်ပြီး အတူတူ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် သီချင်းဆိုပြတာမျိုးတွေ ပြုလုပ်ပါ။ Achitzone.com
၇။ တူညီတဲ့အရာတွေ လုပ်ပါ။
စာအုပ်တစ်ခုတည်း အတူတူဖတ်တာမျိုး TV show ဒါမှမဟုတ် ရုပ်ရှင် တစ်ခုတည်းကို တူတူကြည့်တာမျိုး လုပ်ပါ။ ဒါမျိုးလုပ်တဲ့အတွက် နှစ်ယောက်စကားပြောတဲ့အခါ ပြောစရာအကြောင်းအရာတွေ များမယ်။ ဆွေးနွေးစရာတွေ များပါလိမ့်မယ်။ Achitzone.com
၈။ တစ်ယောက်ဆီ တစ်ယောက် အလည်အပတ်သွားပါ။
ဒါက အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ ဝေးနေရတဲ့အချိန်တွေ စောင့်ရတဲ့အချိန်တွေကို နှစ်ယောက်အတူရှိရတဲ့ အချိန်လေးတွေ အမှတ်တရလေးတွေက ကုစားပေးပါလိမ့်မယ်။ Achitzone.com
၉။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရိုးသားပွင့်လင်းပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ ခံစားချက်တွေ ကြောက်ရွံ့မှုတွေ စိုးရိမ်မှုတွေကို ပြောပြပါ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပွင့်လင်းပါ။ လျှို့ဝှက်ချက်တွေ မထားပါနဲ့။ ပြဿနာတွေကို တစ်ယောက်တည်း ရင်မဆိုင်ပါနဲ့။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ရင်ဖွင့်ပြီး အကူအညီယူပါ။ Achitzone.com
၁၀။ တစ်ယောက်ရဲ့ နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အချိန်ဇယားတွေ အချင်းချင်း သိထားပါ။
ဒါဆိုရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အလုပ်ရှုပ်နေလား အားလားဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေတော့ဘူးပေါ့။ Achitzone.com
၁၁။ social media မှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အမြဲ အဆက်အသွယ်ရှိနေပါစေ။
တစ်ယောက်ဓာတ်ပုံတစ်ယောက် like လုပ်ပေးတာ post တွေမှာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် tag လုပ်တာ တစ်ယောက် wall မှာ တစ်ယောက် share လုပ်ပေးတာတွေ လုပ်ပေးပါ။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ဂရုစိုက်ကြောင်းပြပါ။ Achitzone.com
၁၂။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အမှတ်တရဖြစ်စေမဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေ ပေးပါ။
လက်စွပ်သေးသေးလေးပဲဖြစ်ပါစေ သော့ချိတ်လေးတွေ အရုပ်လေးတွေ ရေမွှေး သီချင်းခွေ စတဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ အမြဲတွေ့နေနိုင်တဲ့ သေးသေးမွှားမွှားလေးတွေကလဲ သတိရမှုတွေနဲ့ အချစ်တွေ ခိုင်မြဲစေမှာပါ။ တခြားသူတွေအတွက် အသေးအမွှားလေး ဘညတန်ဖိုးမှမရှိတဲ့အရာဖြစ်နေပါစေ နှစ်ယောက်အတွက်တော့ အမြဲသတိရစရာဖြစ်နေမှာပါ။ Achitzone.com
၁၃။ အကောင်းမြင်စိတ် အမြဲမွေးပါ။
ဝေးနေရတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ နှစ်ယောက်လုံးဟာ အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ အမြဲတွေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ စောင့်ရတာ ဝေးနေရတာက နာကျင်ရနိုင်ပါတယ်။ အထီးကျန်မှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ တွေးပြီး ချစ်ရတဲ့သူတစ်ယောက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ပျော်နေလိုက်ပါ။ အားငယ်စရာတွေ မတွေးဘဲနေပါ။ အမှတ်တရလေးတွေ ပြန်တွေးပြီး ပျော်ပျော်နေလိုက်ပါ။ တစ်နေ့နီးမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ပျော်ပျော်နေလိုက်ပါ။ တစ်ယောက်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုက တစ်ယောက်ကို ကူးစက်ပြီး ပျော်စရာတွေနဲ့ အလွမ်းတွေကို ဖြေသိမ့်နိုင်ပါတယ်။ Achitzone.com
ယခုဆောင်းပါးကို Achitzone.com မှ တင်ဆက်ပါသည်။